Ngaba ulahlekelwe ukushisa kwentwasahlobo, kwaye ubusika akukhawulezi ukuphela? Abaqulunqi bancoma indlela efanelekileyo yokujongana ne-blues: ukuhlaziywa kwe-wardrobe ngokuhambelana nemigqaliselo yakutshanje. Khangela i-lucbuk height couture - uya kutshatyalaliswa yimpompo yangempela yembala. Kungenxa yokuba isigaba sombala sePalone sasiquka ipalali ephuzi kunye nobomvu kwicandelo lohlobo-2017. I-Admire, khumbula kwaye uzame.
I-garden ye-Neon: i-shadow shades ye-Pantone entwasahlobo
I-Primrose Yellow - umthunzi wePalone ngezimo ezinesibindi nezovuyo. "I-primrose ephuzi" ikhanya ngokukhanya kwelanga, ikhunjulwa - i-thaw isingqongqo. I-tone ephuzileyo neyantliziyo ebomvu ilungile njengoko ibukeka imifanekiso yonke, kwaye njengemvelaphi ephawulekayo yezixhobo ze-monochrome okanye ezikhanyayo. Ungesabi ukuzama ukuhlanganiswa okungaqhelekanga: abayili befashini badibanisa kalula i-Primrose Yellow nebomvu, i-orange, i-malachite kunye nesaladi.
Iingubo ze "Sunny" kwiingqokelela zikaSalvatore Ferragamo, Tibi, Izidalwa zoThuthuzelo
I-Pink Yarrow yi-quintessence yobuhle kuyo yonke imbonakalo yayo ebalulekileyo. Umthunzi we "pink yarrow" uthathe konke ubuhle be-pallet ebomvu: ukugqithisa kwe-fuchsia kunye ne-strawberries, i-caramel neon kunye nobubomvu bobukhosi bakha into emangalisayo kumbala wesikhalazo, apho abahlaziyi befashini baxela ukudumala kobuqhetseba kunyaka ozayo. Ukukhetha i-pin epheleleyo kunye nokuyongeza ngeempawu ezichaseneyo, uyaqinisekiswa ukuba uyakuvuyela ukunakwa.
Ipeyinki ekhanyayo yiphepha elitsha kwimbali yesitayela se-smart chic esuka eHermes, Sportmax, Bottega Veneta, Zac Posen
Ukuba unaswele umbala nomlilo, qwa lasela iFlamme - umthunzi ongaqhelekanga wendlela yentwasahlobo yeNtone. Umbala obomvu kunye nombala obomvu obomvu nge-orange pod ufana neelwimi zelangabi elivuthayo. Musa ukwesaba ukukhanya kwayo - kuyo yonke imibala yayo, iFlamme iyamangalisa into ekhethekileyo, ibe yindlela engcono kakhulu kumbala wendalo. Ukongezelela, uya kufeza ngokuthe ngqo ngxaki yokuba "akukho nto enxibayo": iifenethi "ezinomlilo" zivuselela kalula ii-Kazehal-images.
"Izambatho" zokugqoka kwimiboniso kaElilio Pucci, Sportmax, Christian Siriano
Indlela yokugqoka i-stylishly ngo-2018 kwaye ungayisebenzisi imali eninzi
Indlela yokugqoka emva kweminyaka engama-50: imithetho ka-Anna Wintour iya kukuguqula ibe yimbolo yesitayela!
Isikolo sexesha: Ukubuyela esikolweni-umzila wonyaka-2016
Kwinqanaba le-couture eliphezulu: Izinto ezi-TOP-3 ezenza umfanekiso wakho uphawuleze
Le mithetho yokutya izokukwenza ube mnandi: kufuneka ukwazi!
Ukutya 7 iipilisi: amanyathelo asixhenxe ekunciphiseni
Intsingiselo yama-moles: Yiyiphi intlekele echazwe ngama-birthmarks ebusweni, entloko nasemzimbeni
I-sawuce ye-Shrimp: 6 zokupheka kuzo zonke izihlandlo
Ikhefu le-Curd peat
Indlela yokusebenza nabasebenzi